Naghachi ozi ịntanetị site na draịva & diski
DataNumen Outlook Drive Recovery bụ ngwá ọrụ dị ike iji nwetaghachi ozi ịntanetị Outlook na ihe ndị ọzọ site na draịva & diski ozugbo. Dị ka ogologo dị ka ị na-echekwa Outlook PST faịlụ na obodo draịva ma ọ bụ diski na n'oge gara aga, mgbe ahụ n'ihi ihe ọ bụla i nwere ike ịnweta data Outlook, ị nwere ike iji anwansi a iji weghachite data maka gị.
Cheta na: Ọ bụrụ na faịlụ Outlook PST ka dị na diski ma ọ bụ draịva gị, biko jiri ya DataNumen Outlook Repair iji weghachite ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ site na faịlụ PST.
4.90 / 5 (site na 1,627 votes)
Gịnị mere DataNumen Outlook Drive Recovery?
Injinia lara ezumike nká
27bọchị nke iri na asatọ n’afọ 2021
Ihichapụ Outlook .pst faịlụ na mgbe efu nke egweri biini na ndudue.
Na-adịgide adịgide ihichapụ faịlụ Outlook .pst n'amaghị ama.
Hazie mbanye nwere Outlook .pst faịlụ na ndudue.
Hichapụ nkebi nwere Outlook .pst faịlụ na ndudue.
Re-nkebi disk na ndudue na lost draịva nwere faịlụ .pst.
Enweghị ike ịgụ draịva ma ọ bụ diski nwere faịlụ .pst n'ihi ngwaike ngwaike.
Mbanye ma ọ bụ diski nwere faịlụ pst enweghị ike ịbụ starTed ma ọ bụ ghọtara n'ihi nrụrụ aka na MBR, okpokoro nkebi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Maka okwu niile dị n'elu, yana okwu ọ bụla ọzọ mgbe ịnweghị ike ịnweta data Outlook echekwara na draịva ma ọ bụ diski mpaghara gị, ị nwere ike ịgakwuru DataNumen Outlook Drive Recovery.
Main Akụkụ na DataNumen Outlook Drive Recovery v8.5
Nkwado iji wepụta faịlụ PST edoziri na usoro Outlook 97-2002 na usoro Outlook 2003-2016.
iji DataNumen Outlook Drive Recovery iji weghachite data Outlook
Ọ bụrụhaala na ị chekwara data Outlook na draịva gị ma ọ bụ diski gị, mgbe ahụ maka ihe ọ bụla ị na - enweghị ike weghachite ma ọ bụ nweta data Outlook gị, ị nwere ike iji DataNumen Outlook Drive Recovery iji weghachite ozi ịntanetị Outlook na ihe ndị ọzọ site na draịva ma ọ bụ diski maka gị.
MARA: MGBE ỌD THEDATA DATA NA-EME NA DATA NA-ECHICHE MERE N'THELỌ ỌR OR MA Ọ B OR N'DISLỌ AH OR, Biko EBEGH CH MA Ọ B CH Gbanwee OZI Ọ B ONLA NA D THATR DR NA ỌR OR. DODR GA-AKANYA AKWATAKWỌ DATA NA-AKW THATKWỌ MA Ọ B DIS NT DISR DIS NA Ọ D NEGH W WERE MA Ọ B CHLA Ọ B DRATA NA Ọ B D!
Cheta na: Tupu mgbake, biko mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ.
Ọ bụrụ na ezi uche mbanye ebe gị Outlook pst faịlụ ndị mbụ echekwara ka dị na nha ma ọ bụ ọnọdụ ya agbanwebeghị, ma biko họrọ na mbanye na-ike i beomi:
Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ezi uche mbanye adịghị adị ọzọ, n'ihi re-nkebi nke disk, lost nke MBR ma ọ bụ nkebi ozi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ka a na-agbanwe ma ọ bụ weghachite ya na ngwaọrụ nkewa dị ka Partition Magic, mgbe ahụ ị kwesịrị ịtọ disk diski niile na-echekwa pst faịlụ dị ka diski isi na-enyocha ya:
Ọ bụrụ na ị pịnye-na ma ọ bụ si a mbughari disk na kọmputa gị mgbe DataNumen Outlook Drive Recovery na-oru, ị nwere ike pịa bọtịnụ iji mee ka draịva na ndepụta diski nwee ume na igbe ngwakọta.
Ọ bụrụ na ịmara ụdị nke isi iyi Outlook data ka eweghachite, ị nwere ike ịkọwa ya na igbe ngwakọta n'akụkụ diski ma ọ bụ ụgbọala ngwakọta igbe. Ọ bụrụ na ị hapụ usoro dịka "Ekpebisiri ike", mgbe ahụ DataNumen Outlook Drive Recovery ga-enyocha isi iyi data Outlook iji chọpụta usoro ya na akpaghị aka. Agbanyeghị, nke a ga-ewe oge ọzọ.
Biko gosipụta aha faịlụ echebere naanị. N'oge usoro mgbake, DataNumen Outlook Drive Recovery ga-agbake niile Outlook data si disk ma ọ bụ mbanye ị họrọ, wee chekwaa natara data n'ime ọhụrụ faịlụ na aha a.
Nwere ike itinye mmepụta ofu faịlụ aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ.
MARA: Iji gbochie ịmechi data gị na isi iyi ma ọ bụ diski, biko ahọrọla aha aha aha njirimara na isi mmalite ma ọ bụ diski.
I nwekwara ike ịkọwapụta usoro nke faịlụ mmepụta na igbe ngwakọta . Ọ bụrụ na ịhapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Drive Recovery ga - ewepụta faịlụ ndị edoziri dịka ụdị nke Outlook arụnyere na kọmputa gị.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Outlook Drive Recovery ga start na-enyocha nyocha ma ọ bụ diski ahọrọ, ma na-agbake ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ na ya. Ogwe ọganihu
Mgbe mgbake usoro, ọ bụrụ na ọ bụla data e natara site na draịva ma ọ bụ disk ọma, ị ga-ahụ a ozi igbe dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu PST faịlụ na Microsoft Outlook. Dum nchekwa hierara ga-ewuzi chy na faịlị PST edoziri ma nweta ihe ndị ahụ ma tinye ya na folda mbụ ha. Maka lost & achọtara ihe, a ga-etinye ha na folda dịka Recovered_Group1, Recovered_Group2, wdg.
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.8 weputara na Disemba 24th, 2020
DataNumen Outlook Drive Recovery A na-ahapụ 7.6 na November 7th, 2020
DataNumen Outlook Drive Recovery 2.0 wepụtara na February 5, 2014
Nkwado Outlook 2013.
DataNumen Outlook Drive Recovery A tọhapụrụ 1.5 na Disemba 15, 2010
Melite nchọpụta njehie, nhazi na usoro mkpesa.